शक्तिराष्ट्रहरुले प्रक्षेपण गरेका अणुवम क्षेप्यास्त्रको मार हामीले खेप्नु परिहेको छ :–नगर प्रमुख रावल — Digital News
डिजिटल संचार संवाददाता प्रकाशित : २०७५/९/३ गते
जनताप्रति उत्तरदायी जनप्रतिनीधि र राज्यप्रति जिम्मेवार नागरिक बनाउनु हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो । त्यसकारण हामीले हाम्रो प्याक मिडिया नेटवर्कद्धारा सञ्चालित मिडिया अनलाईन डिजिटल सञ्चार डटकमवाट हामी नियमित रुपमा ‘जनतासंग जनप्रतिनीधि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने सोचमा पुगेका छौं र हामीले हाम्रो मिडिया अनलाईन डिजिटल सञ्चारमा ‘जनतासंग जनप्रतिनीधि कार्यक्रम’ मा विशेष गरि स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिलाई निमित रुपमा समावेश गर्ने प्रयास गर्नेछौं । ‘जनतासंग जनप्रतिनीधि कार्यक्रम’ को पहिलो अंकमा जाजरकोट जिल्लाका तीन वटा नगरपालिका प्रमुख र चारवटा गाउँपालिका अध्यक्ष ज्युहरुलाई एकै प्रकारका प्रश्नवली गरेका छौंं र क्रमश हामी जिल्लाका सवै गाउँ तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख ज्युहरुको धारण पढ्न र बुझ्न पाउने छौं । ‘जनतासंग जनप्रतिनीधि कार्यक्रम’ को पहिलो अंकको एक नम्बरमा नलगाड नगरपालिकाका मेयर टेकबहादुर रावल (दर्शन)संग गरिएको कुराकानीलाई जस्ताको त्यस्तै प्रकाशन गरिएको छ । पढेर धारण बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला ।
१) हाम्रो मिडिया अनलाईन डिजिटल सञ्चारमा मेयर सावलाई हार्दिक स्वागत छ ?
२) जनप्रनीधिको रुपमा पदवहाली भएको झण्डै पौने दुई बर्ष हुन थाल्यो, निर्वाचनताका जनताका वीचमा गरेका बाँचाहरु कतै भुल्नु त भएको छैन ?
–निर्वाचनका क्रममा मैले जनताका विचमा कुनै पनि वाचा गरेको छैन । निश्चित रुपमा विगत केही वर्ष अगाडीका चुनावहरुमा त्यसो गरेको सुनिन्थ्यो चुनावताका जनतालाई अनेकौ अनेक आश्पासनहरु दिइन्छन् । आश्वासनका नाममा भ्रमपूर्ण र असम्भव प्रकारका वाचाहरु गर्छन् । त्यसो गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने म नै हुँ ।
३) जनताको विश्वास जित्नका लागि निर्वाचनमा के कस्ता बाँचाहरु गर्नु भएको थियो र हाल जनप्रनीधि भईसकेपछि ती बाँचाहरु कति पुरा गर्नु भयो ?
–मैले अगाडी नै अभिव्यक्त गरिसकेको छु की निर्वाचनका क्रममा जनताको विचमा गएर कुनै पनि वाचा गरेको थिइन । जनताले स्वभाविक रुपमा मलाई चिनेका थिए र विश्वास पनि गरेका थिए र अपेक्षा पनि गरेका थिए । यद्यपी वाचा गरेका जति मात्र पुरा गरिनुपर्छ भन्ने अर्थ लगाइनु पनि हुँदैन । तर, मैले आफैले निर्वाचित भइसकेपछि जनतालाई स्थानीय लोकतान्त्रिक सरकारको प्रत्याभूति दिन अहोरात्र खट्नुपर्छ । राज्य र सरकारी संरचनाको पहुँचबाट बाहीर रहेका गरीब निमुखा, सोझा, सिधा जनताको पक्षमा केही कामहरु गर्नुपर्छ भन्नेमा विस्वस्त थिए । जसको अभ्यास भिषण दश वर्षे जनयुद्धको जनसरकारको प्रमुखको जिम्मेवारीले शिक्षा प्रदान गरिसकेको थियो ।
४) तपाईले आफ्नो पालिकालाई कस्तो पालिका बनाउने सोच्नु भएको छ र कति काम पुरा गर्नु भयो ? कति काम गर्न बाँकी छ ?
– नलगाड नगरपालिकालाई एक शुदृढ शु–सभ्य र विकासित नगरपालिका बनाउन चाहेको छु । “समृद्ध र सफा नगर दिगो विकास र सुशासनको लहर” भन्ने मुल नारामा आधारित हुँदै मैले नगरपापिलकाको समग्र विकास क्रमको गतिलाई अगाडी बढाई रहेको छु । सर्वप्रथम त मैले नेपालको अशिक्षा,रोग र भोकमरीबाट गुर्जियको भनि चिनिने जाजरकोटी जनसमुदायको स्वास्थ्य अवस्थालाई ख्याल गर्दै कुनै पनि मानिसले स्वच्छ वातावरणमा स्वस्थ रुपमा बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आधारित हुँदै नगरपालिका भित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र स्वास्थ्य शिक्षाको कमिबाट भईरहेको विभिन्न झाडापखाला महामारी जस्ता गम्भिर प्रकृतिका समस्याहरुको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ भनेर नगरपालिकाको प्रथम बैठकको सुरुवातमा नै नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विभिन्न स्थानहरुको फोहोर मैला हटाएर नै सुरु गरियो । र यसरी नै एक देखि तेह्रसम्मका वडाहरुमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न अभियानात्मक ढङ्गबाट नै कार्य सञ्चालन गरियो । नगरपालिका भित्रका तल्लु बजार, चौखा बजार, बगारा, दल्ली, कालीमाटी बजार, छेप्का, चिसापानी, कैना बजार, लगायतका क्षेत्रमा आधुनिक खाले डस्टवीनको व्यवस्था गरीयो । प्रत्येक मावि. र वडा कार्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरुमा डस्टवीनको व्यवस्था गरियो । यसका साथै खानेपानी जस्ता महत्वपूर्ण कार्यलाई दृष्टीगत गरेर पानीको सहज पहुँच अनुरुप पानीलाई व्यवस्थित गरियो र केही स्थानमा गर्ने क्रममा छन् । सडक, विजुली, स्वच्छ पिउने पानी, विद्यालयको भौतिक संरचना साथै मानविय दैनिक जीवनयापनका सवालमा ठोस निति तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गरिएको छ । यसरी नँै नगरपालिकालाई एक नमुनायोग्य नगरपालिका वनाउन सनिवार विदा कुनै पनि समय नभनेर सेवा प्रदान गरिएको छ । विवाद विना नै वडा कार्यालयहरुको स्थापना गरिएका छन । विकासको गतिको सिमित समय त छैन । विकासको नियम मानव जीवन प्रयन्त चलिनै रहन्छ ।
५) तपाई जनप्रतिनीधि भईसकेपछि तपाईको पालिकाले गरेका राम्रा काम तथा जनताले अनुभुति गर्नेगरी गरिएका कामहरु के–के हुन् ?
– मैले नगरप्रमुखको जिम्मेवारी पाइसकेपछी नलगाड नगरपालिकाले गरेका राम्रा कामहरुमा सर्वप्रथम त नगरपालिकाका तेह्र वटा वडाहरुमध्ये एघार वटा वडाहरुमा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । तेह्र नम्वर वडामा सडक सञ्जाल जोडिने क्रममा छ । शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिएको छ । विद्यार्थीले शिक्षकको हाँजीरी र शिक्षकले विद्यार्थीको हाँजीरी लगाउने नियमको व्यवस्था गरिएको छ ।
परिक्षा प्रणाली देखि पठन पाठनको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चौध वटा नमुना विद्यालय छनौट गरीएको छ । यी नै विद्यालयहरुमा भौतिक संरचना देखि अत्याधुनिक शिक्षण पद्यती प्रक्रियालाई अगाडी बढाउन मेशिनेरी सामानको जडान गरिएको छ । यसरी नै तेह्र वटा वडाहरुमा नमुना वस्तीको छनौट गरी एकीकृत नगर विकास गुरुयोजना तयार पारी अगाडी बढाईएको छ । विभिन्न समयमा आँखा तथा कान शिविर, स्त्री रोग सम्बन्धी शिविर, चर्मरोग सम्बन्धी शिविर, सिजनल फ्लु जस्ता विभिन्न रोगहरु सम्बन्धी शिविर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कृषी क्षेत्रलाई आधुनीकिरण गर्न र कृषकहरुलाई उत्साह जगाउन वडा नं. १ र २ लाई मौरी पकेट क्षेत्र, वडा नं. ३ लाई सुन्तला जोनसँग जोडिएको छ । वडा नं. ४ र ५ लाई मकै व्लक क्षेत्र र वडा न ६ लाई आलु उत्पादन क्षेत्र, वडा नं. ७ र ८ लाई धान उत्पादन क्षेत्र, वडा नं. ९ , १० र ११ लाई लसुन खेति र बाख्रा पालन क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यसैगरी वडा नं. १३ लाई स्याउ खेति घोषणा गरिएको छ । यस रणनैतिक योजनाका लागि आवश्यक पर्ने वजेट तथा विभिन्न सामाग्रीहरुको वितरण गरिसकीयको छ । भाद्र २८ र २९ गते नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा आएको भिषण वाढीपहिरोवाट क्षेति भएका स्थानहरुमा तत्काल जनधनको ठुलो क्षेति हुनवाट रोक्नुका साथै राहतका कार्यक्रमहरु वितरण गरियो । हजारौ विधार्थी भाई वहिनीहरुको प्रभावित पढाई लेखाईप्रति गम्भीर हुदै र छिमेकी जिल्ला गाउपालिकाको आवागमनलाइ सुचारु गर्न अस्थाइ पुल पुलेुसा र वाटोघाटो निर्माण कार्यं गरियो । ठुलो भौतिक संरचनाहरुको पुनःनिर्माण कार्यका लागि सहयोग गर्न संघ र प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षणको लागि नगरपालिकाको डेलीकेसन टिम लिएर काठ्माण्डौ र कर्णाली प्रदेश कार्यालय विरेन्द्रनगर सुख्र्रेतका विभिन्न मन्त्रालयमा विपद व्यवस्थापन सम्वन्धि ध्यानाकर्षन गरियो । खानपान र स्याहार सम्हारवाट दैनिकरुपमा सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरुले अकालमा ज्यान गुमाउनुको प्रसव पिडा सगसगै कुपोषण निमोनिया जस्ता रोगवाट वच्न सुत्केरी तथा गर्भवती महिलालाइ पोषण स्वरुप दैनिक एक अण्डा र सुत्केरी महिलाई नगद रु एक हजारका दरले थप गरी दिनुका साथै भिटामीनयुक्त पौष्टिक तत्व खान अनिवार्य गरियो । परिणाम स्वरुप दुईवटै मृत्युदर सुन्यमा झारीयो । अपांग घाईतेहरुको लागि विभिन्न सिपमुलक तथा आय आर्जन मुलक तालिम दिनुका साथै कार्यालयवाट नै परिचय पत्र वितरण कार्य गरियो । भष्टाचार न्युनिकरण गर्न योजनाहरुको नियमित अनुगमन निगरानी सुझाव जस्ता कार्यहरु गरियो । नगरपालिका भित्र कुनै प्रकारका अप्रिय घट्ना हुन नदिन सुरक्षा व्यवस्था सर्तकता अपनाउन व्यापक अन्तरक्रृयासगै निर्देशन गरियो । गाउघरमा हुने कुनै पनि झैझगडा मुद्धामामीलालाई व्यवस्थि त गर्न न्यायीक समितिलाई अझ वढी कृयाशिल वनाईएको छ ।
६) तपाईको पालिकाले नागरिक सेवा प्रवाह गर्ने सन्दर्भमा नियम ऐनहरु बनेका छैनन् भनेर पन्छिने गरेको भन्ने आरोप छ, हालसम्म के कति नियम, ऐनहरु बनाउनु भयो र के कति बनाउन अझै बाँकी छ ? स्थानीय तहले बनाउनु पर्ने सबै ऐन कहिलेसम्म बनाई सक्नु हुन्छ ?
–यो सवै सही कुरा त होइन । जनताका दैनिक जीवनमा भैपरी आउने समस्याहरुमा कुनै पनि ऐन नियमले वाधा पार्दैनन र पार्नु पनि हुदैन किनकी जनता इतिहाँसका निर्माता हुन । नागरीकहरुले आफ्नो अधिकार पाउनु उसको कर्तव्य र नैसर्गिक अधिकार हो । निति तथा नियमहरु निर्माण गर्नु निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको अहंम दायीत्व र जिम्मेदारी दुवै हो । हामीहरुले त्यसरी भनेका छौ जस्तो त लाग्दैन । थुप्रै निति नियमहरु निर्माण गरिएका छन । केही निति तथा एन नियमहरु संघ तथा प्रदेशको अस्पस्टताको कारणले गर्दा ढिला भएका हुन । अव ति निति तथा नियमहरु निर्माण भैसकेका छन । नलगाड नगरपालिकामा प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई अझ बढी प्रभावकारी, पारदर्शीता र जनसहभागीतामुलक बनाउन नलगाड नगरपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमीत) गर्ने ऐन देखि जनगुनासाहरुलाई समेट्नको लागि गुनासो सम्बोधन कार्यविधि, जनता बिच न्यायलयको स्थापनार्थ न्यायीक समीतिको कार्यविधि, जनतालाई आइपर्ने विभिन्न विपद्हरुलाई न्युनीकरण तथा राहत वितरणको लागि विपद व्यवस्थापन कोष कार्यविधि तयार पार्नुको साथै कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुको आचारणलाई समेत सुधार तथा निर्देश गर्नको लागि आचारसंहिता समेत निर्माण गरी लागु गरिसकिएको छ । यसका अलावा हामीसँग तीस भन्दा बढी कानूनहरु बनीसकेका छन् र आवश्यकता अनुसार बाँकी कानूनहरु बन्ने क्रममा नै छन् ।
७) व्यबसाय दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहसंग भएता पनि ऐन नबनाउदा ब्यबसाय दर्ता गर्न नपाएको भन्ने ब्यापक जनगुनासो छ के हो ?
–व्यवसाय दर्ता गर्नको लागी अगाडी नै नगरपालिकाले साना उद्योग तथा घरेलु विकास समितिका प्रतिनिधिहरु वोलाएर लामो समयसम्म नगर कार्यालय दल्लीमा व्यवसाय दर्ता गर्ने कार्य सञ्चालन गरीयो । जहासम्म ऐन नियमको कुरा छ । व्यापारिक फर्म दर्ता सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरुका वजारमा छलफल गरी नगर कार्यपालिकावाट पारित गरिएको छ ।
८) संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने ९ सय ऐनहरुमा हालसम्म ५ सय ऐन मात्र बनाएको भन्ने सुनिन्छ, यस बिषयमा तपाईको धारणा के छ ?
–मेरो विचारमा अन्यौल्ता संघ र प्रदेशमा नै अलि वढी छ जस्तो लाग्छ । हुनत नेपाली समाज विषम परिस्थितिवाट गुज्रीरहेको छ । उषाकालीन समय प्रभातीको फेरीमा नविनतम श्रृजनाको सुत्राधार पहिल्याइएको छ । जनताले चाहेको संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थाको नयाँ युगको नयाँ अभ्यास भैरहेको छ । युग वदलीयको छ, व्यवस्था वदलियको छ । सम्यन्त्र वदलियका छन । सोचाइहरु वदलियका छन । परिस्थिति ठिक वदलियको छ । मानसपटलहरु वदलियका छन । जसले हरेक प्रकारका चिजको नयाँ सुरुवात गर्नुं पर्ने भएकाले पनि अन्यौल्ता हुनु स्वभाविक हो । अहिलेको वर्तमान अवस्थामा ऐन र नियम मात्र वनाउनु नै ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन वनेका ऐन नियमहरु सहजरुपमा कार्यन्वयन गर्नु नै महत्वपुण हो । अत यति हुदाहुदै पनि नियमहरु ढिला वन्नु पर्छ भन्ने अवस्य होइन । यस व्यवस्थाले त अझ वढि जिम्मेवार भएर अझ वढी मेहनेतका साथ काम गर्नु पर्छ । जहासम्म ऐन कानुन निर्माणको कुरा छ । जुन वनिरहेका छन र वन्दैछन । भन्ने सुनेको छु ।
९) प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने ऐनहरुमा कर्णाली प्रदेशले के कति ऐनहरु बनायो र के कति ऐनहरु बनाउन बाँकी छ तपाईलाई केही जानकारी छ भने बताई दिनुहोस न ?
–यस प्रश्नको जवाफ अगाडीनै दिईसकेको छु ।
१०) तपाईलाई मनपरेको बिकास मोडेल कुन हो ? बताई दिनुहोस न ?
–हालसम्मको अनुभवबाट मेरो लागि जनचासो, जनसरोकार, जनसहभागीता र जनकल्याण मा आधारीत दीगो विकासको मोडेल नै उपयुक्त हो जस्तो लाग्छ । यसको सार्थै एकीकृत वस्ती विकास हो तर हाम्रो जिल्लामा तत्काल यो संभव छैन ।
११) तपाईले भनेको एकीकृत बस्ती विकास मोडेलकावारेमा सर्वसाधारण जनताले भुझ्ने भाषामा प्रस्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
–हो हामीले भनेको एकिकृत वस्ती विकासको मोडल चारैतिर छरिएर रहेका जहाँ केन्द्र सरकार राज्य र स्थानीय सरकारले विकासको क्षेत्रमा शसक्त उपस्थिति जनाउन सकिएको मानिदैन त्यो असम्भव पनि हुन्छ । त्यसैले ति सवै नागरीकहरुलाई केन्दित गरेर वस्ति वसाली सडक सञ्जाल यातायात, शिक्षा स्वास्थ्य, विजुली, भौतिक संरचना सुदृढ अर्थ प्रणाली जस्ता क्षेत्रमा रणनैतिक महत्वका योजनाहरु निर्माण गर्न समग्र विकासको भावी कार्य दिशा निर्देश तयार पार्न सजीलो हुन्छ । गुरुयोजना तयार पारी सेवाप्रदायी सँस्था र सेवाग्राही दुवैलाई एकआपसमा जोडिएर जानका लागिपनि यो महत्वपृुण छ । अँझ भन्दा राज्य,र नागरिक दुवैलाई व्यवस्थित गर्न पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।
१२) गुरुयोजना निर्माण नगरेरै विकास निर्माणका कामहरु अगाडी वढाईने गरिएको छ, जसले गर्दा वातावरणि प्रभाव मुल्याङकण रिर्पोट बीनानै गरिएको बिकास निर्माणले भु–क्षय निम्त्याएको भन्ने आरोप छ यस बिषयमा के भन्न हुन्छ ?
–निकै महत्वपुर्ण प्रश्न सोध्नु भयो । यस्ता खालका प्रश्नहरु यदाकदा आउने गर्दछन । यसलाई नकार्न त मिल्दैन तर यस नगरपालिकामा भु–क्षय हुने प्रमुख कारण चाही यो मात्र पनि होईन जस्तो लाग्छ । हो हामी गुरुयोजना वनाउने क्रममा छौ । वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न गुरुयोजनालाई मात्र पर्खनु पर्छ भन्ने पनि छैन । यसको लागि त आम जनमानसमा ध्यान पुग्नु जरुरी छ । ठुला शक्तिराष्ट्रहरुको प्रविधिमा विकासको होडवाजी उद्योग कलकारखानाले फालेको धुवा धुइरो, मिसाइल अणुवम,क्षेप्यास्त्रको प्रक्षपन, वनजंगल फडानी आगजनी जस्ता कार्यहरु भु–क्षय हुनका प्रमुख कारण हुन । गुरुयोजना बनाएर विकास गर्ने कुरा राम्रो हो तर कतिपय अवस्था जटिल भएको कारण अगाडी बढ्न जरुरी छ ।
१३) नगरपालिकाले एकीकृत विकास योजनालाई जोड्न नसकेको वितरणमुखी योजनाहरु संचालन गरेको भन्ने सुन्नमा आउछ यस बिषयमा तपाईको भनाई के छ ?
–यसमा सत्यता छैन । यस नगरपालिकामा एकीकृत नमुना वस्तीको छनौट गरिएको । जसवाट एकीकृत योजना जोड्नको लागि निकै महत्वपुर्ण छ । नमुना विद्यालयको छनौट गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, विद्युत सुचना सञ्चार आदि क्षेत्रमा पनि जोडिएको छ ।
१४) अहिलेका जनप्रतिनीधि कमाउ धन्दा (नीति आफै निर्माण गर्छन, योजना छनौट र वजेट बिनियोजन आफै गर्छन, उपभोक्ता समिति गठन गरि गोप्य सौदावाजी आफै गर्छन, योजना कार्यन्वयनको अनुगमन, मुल्याङकण आफै गर्छन् र अन्तमा भुक्तानी दिनहुन भन्ने तोक आफै लगाउछन) मा छन भन्ने आरोप छ, यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
–हो जो जसले गरेका छन उनैलाई सोध्दा यस प्रश्नको जवाफ मिल्ला यस नगरपालिकामा यस्तो भएको छैन र हुन पनि दिईदैन यदी कोही कसैले गरेको पाईएमा कडा भन्दा कडा कार्वाही गरिने छ । यस विषयमा व्यापक छलफल गरिएको छ । यहाका कर्मचारी जनप्रतितिधि, उपभोक्ता सवैलाई भ्रष्टाचारको निर्मुल लगाएतका विषयमा निर्देशन गरिएको छ । तपाँईले सोध्नु भएका सवै प्रश्नहरुको वारेमा निकै गम्भीरतापुर्वक मैले महान जनयुद्धको आधिवेहरीमा हामफालेर कसम खाइसकेको छु । मैले लिने स्वार्थ कुनै पनि छैन । किनकी होनहार नेपाली जनताको आँशु हासो रोदन वलिदानी कुर्वानी पिडा वेदनाका अनन्त श्रृजनाको योग नै नेपालको नयाँ संविधान हो । संघिय राज्य व्यवस्था हो । यसलाई सँस्थागत विकास र निस्वार्थ सेवा प्रवाह यसको महान उपलव्धी हो । सबै जनप्रतिनिहिरु एकै छैनन् लोकतान्त्र प्राप्त पछिको विकासको गतिलाई राम्रोसँग वुझ्दा हुन्छ ।
१५) तपाईको पालिकामा रहेको न्याय विभागले न्याय सम्पादनका कामलाई कसरी अगाडी वढाएको छ र विभागले जनमुखी न्याय दिएर फैसला गरेका महत्वपूर्ण मुद्धाहरु कुन–कुन हुन ?
–नलगाड नगरपालिकामा न्याय विभागको कामलाई न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थीत गर्न उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायीक समिति गठन गरिएको छ । जसको काम कर्तव्यलाई निर्देश गर्नको लागि न्यायीक समिति कार्यविधि २०७५ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जसअनुसार न्याय सम्पादनका कार्यहरु अगाडी बढीरहेका छन् । विशेष गरी पारिवारिक झै झगडा, लेनदेन , अंशवण्डा जस्ता सामाजिक समस्याहरु र पारिवारिक समस्याहरुसँग सम्बन्धीत मुद्धाहरुको फैसला हुँदै आइरहेका छन् ।
१६) अन्तमा तपाईले भन्नै पर्ने केही कुरा छ कि ?
– सर्वप्रथम त मलाई यहाँसम्म ल्याइदिएर मेरा अनुभव तथा हालसम्म जनताका माझमा गरेका कामहरुलाई सार्वजनिक गर्ने महत्वपुर्ण अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो मिडिया अनलाईन डिजिटल सञ्चार माध्याम प्रति आभार सहित हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दछु । र यसै लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत सम्पूर्ण नगरवासीहरुमा “समृद्ध र सफा नगर दिगो विकास सुशासनको लहर” भन्ने नाराको मुल मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्दै दिगो विकासको चाहाना वेग्र प्रतिक्षामा रहेका समुदायहरुले नगर विकासको निस्वार्र्थ हितको लागि कटिवद्ध भएर जुट्न अठोटका साथ अपिल गर्दछु ।
‘जनतासंग जनप्रतिनीधि कार्यक्रम’ को पहिलो अंकमा महत्वपूर्ण समय दिएर जनताका नाममा अमुल्य विचार राख्नु भएकोमा नलगाड नगरपालिकाका मेयर टेकबहादुर रावल (दर्शन) ज्युलाई हृदय देखिनै धन्यवाद दिन चाहान्छौं । साथै आगामी अंकहरुमा पनि मुल्यवान समय दिनु हुनेछ भन्ने शुभेक्षा राखेका छौं । धन्यवाद ।